China Beer Crate akpụzi Emeputa na Factory | Aojie akpụzi
Tụkwasịnụ Beer Crate akpụzi Ihe: eyi / Pee Size # OEM / ODM Service # Mbukota nkọwa: osisi igbe Mbupu Port: guangzhou
Ebe ọ bụ na ihe ọ ofụ ofụ biya biya bụ ihe mgbagwoju anya, anyị na-agbakwunye ihe ntinye ọla kọpa beryllium iji belata oge obi jụrụ ma jiri usoro ndọtị mee ihe n'oge ogwu ahụ. Ebe ọ bụ na igbe biya bụ akụkụ ịchọ mma, nrụrụ nke akụkụ biya bekee chọrọ ka ọ dị obere iji mezuo ọgbakọ dị mma. Agaghị enwe ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụ ụzọ ntụtụ ejection n'elu akụkụ plastik.
Beer crate ebu mgbidi chọrọ isi Anam Udeme na-eji Ha barking Ọdịdị na Anọ n'akụkụ. Na mmeputa, oge ụfọdụ ndọ wedge na-adị oke ike, yana ebe a na-a beerụ biya na-adị na ngalaba a na-akọwaghị aha ya ma sie ike nkwụsị. Iji dozie nsogbu a, anyị mere Ha barking na nko na-adọpụ na-apụ n'otu oge.
Item aha: Beer Crate akpụzi
Ihe: eyi / Pee
OEM / ODM Ọrụ #
Ebute oge: 25-55days mgbe nkwụnye ego
Mbukota nkọwa: osisi igbe
Mentkwụ &gwọ & Mbupu Okwu mentkwụ termsgwọ okwu: T / T (30% nkwụnye ego, 70% tupu Mbupu)
Port Mbupu: guangzhou
Nke gara aga: Auto ọzọ Parts
Osote: Agricultrial Crate akpụzi
Q: Kedu ọrụ ị na-enye?
A: Anyị na-emepụta ihe eji akpụ akpụ plastik ma mepụta akụkụ ọgwụ plastik maka ịlele na nnukwu ọrụ.
Q: Kedu ka m ga - esi kpọtụrụ gị?
A: can nwere ike zitere anyị ajụjụ site na email, WhatsApp, Skype ma ọ bụ WeChat. Anyị ga-aza gị n'ime 24 awa.
Q: Kedu ka m ga-esi nweta nkwuputa?
A: Mgbe ị nabatachara RFQ gị, anyị ga-aza gị n'ime awa 2. Na RFQ gị, biko nye ozi na data ndị a ka anyị wee zitere gị ọnụahịa ịsọ mpi na-adabere na ihe ị chọrọ. CAD, STP, X_T, IGS, PRT, DWG, ma ọ bụ DXFb) Resin information (Datasheet) c) Kwa afọ chọrọ maka akụkụ
Ajụjụ: Gịnị ka anyị ga - eme ma ọ bụrụ na anyị enweghị eserese akụkụ?
A: You nwere ike zitere anyị ihe ngosi plastik gị ma ọ bụ foto nwere akụkụ yana anyị nwere ike ịnye gị ngwọta teknụzụ anyị. Anyị ga-emepụta.
Q: Nwere ike anyị ga-enweta ụfọdụ n'omume tupu uka mmepụta?
A: Ee, anyị ga-ezitere gị ihe nlele maka nkwenye tupu ịmalite imepụta oke.
Ajụjụ: N'ihi ọdịiche dị n'etiti oge na China na esenidụt, kedu ka m ga-esi nweta ozi gbasara ọganihu m?
A: Kwa izu anyị na-ezipụ kwa izu na-enwe ọganihu akụkọ na foto dijitalụ na vidiyo na-egosi na mmepụta ọganihu.
Q: Gịnị bụ oge ndu gị?
A: Oge ọkọlọtọ anyị ga-ebu maka ịkpụzi akpụzi bụ izu 4.N'ihi na akụkụ plastik bụ ụbọchị 15-20 dabere na oke.
Q: Gịnị bụ gị ụgwọ okwu?
A: 50% dị ka nkwụnye ego ịkwụ ụgwọ, 50% ga-akwụ ụgwọ tupu mbufe. Maka obere ego, anyị na-anabata Paypal, a ga-agbakwunye ọrụ Paypal na iwu ahụ. Maka nnukwu ego, a na-ahọrọ T / T
Q: Olee otu m ga-esi emesi anyị ike?
A: N'oge ebu, anyị na-eme ihe na akụkụ nnyocha. N'oge akụkụ mmepụta, anyị na-eme nyocha 100% zuru oke
tupu nkwakọ ngwaahịa ma jụ akụkụ niile na-abụghị ọkwa dị elu ma ọ bụ nke onye ahịa anyị kwadoro.
Plastic Beer Crate akpụzi
Plastic Big crate akpụzi
Plastic Bottle Crate akpụzi
Plastic Bread Crate Nkedo
Plastic Crate akpụzi
Plastic ịkpakọba Crate akpụzi
Plastic Ọgwụ Crate akpụzi
Plastic Akwukwo nri akpa akpụzi